I-Pokémon GO elandelayo yeNiantic isekwe kwiHarry Potter | Iindaba zeGajethi
I-Pokémon GO elandelayo yeNiantic isekwe kwiHarry Potter
Abafana baseNiantic bafuna ukuphinda impumelelo abayifumene kunyaka ophelileyo ngePokémon GO, impumelelo engazange ibonwe kwimbali yemidlalo yevidiyo ye-smartphone. Okwangoku i-Pokémon GO ayisetyenziswanga njengaxa iinyanga zokuqala apho ifikelele khona kwintengiso, nangona namhlanje isenenani elihloniphekileyo labasebenzisi abathembekileyo.
UNiantic ubhengeze ukuba iyasebenza umdlalo omtsha wokwenyani ongezelelweyo osekwe kuHarry Potter, Enye yeencwadi eziphumelele kakhulu kunye ne-movie sagas kule minyaka idlulileyo kwaye inkampani ifuna ukuqhubeka nokucofa umnxeba kaHarry Potter, kanye njengoko yenzayo kunyaka ophelileyo ngePokémon GO.
UNiantic usebenza kumdlalo ongathandabuzekiyo obizwa ngokuba nguHarry Potter: Amagqwirha aManyeneyo, umdlalo apho uWarner Bross esebenzisana khona, okwangoku onamalungelo kuthotho kwaye oza kubona ukukhanya kunyaka olandelayo. Ngokwamahemuhemu ahlukeneyo, lo mdlalo uza kuvumela abadlali ukuba baphonononge umhlaba wokwenene okhangela iziphonso, Ukufumanisa iindawo ezintsha ...
Kungenzeka ukuba, uyilo kunye nokusebenza kwalo mdlalo kufana kakhulu noko sinako okwangoku fumana kwi-IngressNgokuka-TechCrunch, bonke abathandi be-saga kwaye ngakumbi olu hlobo lomdlalo oludibanisa ukungqinwa okungathandabuzekiyo kunye nemidlalo banethamsanqa.
Umbono kaNiantic ubonakala umnandi ekuqaleni, kodwa mhlawumbi esidlangalaleni joliswe kuyo yalo mdlalo, ukhule kakhulu ngokungathi lo mdlalo uyabatsala, kuba eyona incinci kule ndlu ayiqhelananga nokufundelwa ngumlingo lo obe neenkwenkwezi phantse kuzo zonke iincwadi kunye neemovie.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Pokémon GO elandelayo yeNiantic isekwe kwiHarry Potter